Ikhaya / Ukuhlamba igumbi lokuhlambela / Ukuphathwa kabini kwigumbi lokuhlambela lokuhlambela / WOWOW ibhrashi yegolide yegumbi lokuhlambela Igumbi lokulala 4 intshi Igumbi lokuhlambela lokuntywila kwi-Faucet 3 Hole RV Igumbi lokuhlambela umpompo ngeSink
4 Inch ezintathu-Hole Faka: Iza nomsele, i-cUPC eqinisekisiweyo ngemigca yamanzi ashushu nabandayo kunye neiglavu, ukupakishwa okugcweleyo, kwaye kulula ukuyifaka.
Kulula ukuyisebenzisa: Ukujikeleza kwe-360-degree, uyilo oluphezulu lwe-arc, kunokunyusa indawo yokucoca, kuzise lula ngakumbi kubomi bakho bemihla ngemihla. Umbhobho wokuhlambela ophethe izinto ezimbini uvumela ukuba ubulawule ngokulula ubushushu obushushu nobushushu
SKU: 2321400G iindidi: Ukuhlamba igumbi lokuhlambela, Ukuphathwa kabini kwigumbi lokuhlambela lokuhlambela tags: Igolide edityanisiweyo, Bamba kabini
Ndizifakele oku-akukho kuvuza!
Ndandisoyika ukuba ndithenge itompu kule webhusayithi, kodwa ndonwabile kakhulu yile!
Ndibukele iqela leevidiyo zeYouTube kufakelo lwemibhobho ngokubanzi kwaye ndalandela umkhombandlela, kwaye akukho kuvuza kum. Ndongeze WAY ngakumbi i-plumbers putty emva koko izikhombisi zicetyisiwe, kwaye le isenokuba yindlela yokuhamba.
Ukuhamba kwale bomba kukwangummangaliso-wamanzi amaninzi! Ndiyayithanda indlela ispout esiphakamileyo ngayo, ke ndinako ukuyigcwalisa ikomityi okanye ndihlambe ubuso bam ngokulula phantsi kwale.
Sebenzisa i-plumbers putty ngokukhululekileyo kwaye kufanelekile ukuba uhambe!
Le tephu intle. Umbala kukugqitywa okuhle okubhrashiweyo ngenxa yoko awukhazimli njengempompo enexabiso eliphantsi. Kwakulula ukuyifaka kunye nokuphuculwa kwenyani kwendlu yangasese.
Ndithenge ezi-2 zezi mpompo. Kwakulula ukuzifaka kwaye zijongeka kwaye zisebenza kakuhle.